FOREIGN POLICY PARAMETERS, AND UNITED STATES POLICY TOWARDS BURMA | Save Burma
FOREIGN POLICY PARAMETERS, AND UNITED STATES POLICY TOWARDS BURMA
Dictator Watch မှ Roland Watson က မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေအပေါ် ထားရှိမယ့် အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို ရေးသားထားပါတယ်။
FOREIGN POLICY PARAMETERS, AND UNITED STATES POLICY TOWARDS bURMA လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ၂ဝဝ၉ ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့စွဲ တပ်ထားပါတယ်။ www.dictatorwatch.org မှာ တင်ထားပါတယ်။ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ LINK ကတော့ http://www.dictatorwatch.org/articles/burmapolicy.html ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းဆွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သံအမတ်အဖြစ် ခန့်အပ်တဲ့အကြောင်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းဆွေဟာ သူ့ရဲ့ သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဆီမှာ ဧပြီ (၈)ရက်နေ့က ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ဒီကိစ္စကို ကန့်ကွက်ကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရထံ တင်ပြဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို မိတ်ဆွေတို့ ဆက်သွယ်မိနိုင်တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအပြင် မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်း၊ မြန်မာဘလော့နဲ့ မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို မူရင်းကို အောက်မှာ ပူးတွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
On Mon, Apr 13, 2009 at 4:28 AM, Free Burma <announce@dictatorwatch.org> wrote:
Please forward this to any government officials with whom you have
contact, as well as Burma lists, blogs and websites.
We have postedamajor new article:
In the article we call upon the United States to protest war criminal
Colonel Than Swe as the SPDC’s Ambassador to the U.N., who presented his
credentials to Secretary General Ban Ki-moon on April 8th.
« Entertwined History
World focus on Burma (13 April 2009) »